lagtiisa oo kale horyaalka
Flight Gear Qabille oo duulimaad
About FlightGear (No mowduucyo)
FlightGear Qabille oo duulimaad waa il furan, Qabille oo ka freeware horumariyo by Project FlightGear ah. sii daayo kowaad wuxuu ahaa in 1997, oo ilaa hadda waxaa jiray wax badan oo sii daayo.
Inkastoo ay freeware, FGFS waa Qabille oo aad u wanaagsan oo macquul ah. Dhinacyada la is waxaa Qabille oo ka, wax walba oo kale oo la xiriira in ay sidoo kale waa lacag la'aan in ay ka soo dejisan, isticmaalaan iyo sii horumariyo. Si aad u soo dejisan ama haddii aad rabto inaad wax badan ka bartaan waxa ku saabsan, waxa aad samayn kartaa web site ka rasmiga ah FlightGear, www.flightgear.org .
meesha ugu weyn ee ay u soo bixi diyaaradaha kala duwan, in ka badan 400 iyaga ka mid ah, halkan waa: github.com/FGMEMBERS .
wax wanaagsan oo ku saabsan waa in aadan lahayn in aad iska diiwaan gelin si ay u soo bixi diyaaradda aad rabto.
Muuqaalka sheedda laga soo degsan karaa laba siyood, on web site ama iyadoo la isticmaalayo nidaamka TerraSync gudahood Qabille oo ka. Sidoo kale, taas oo ku xidhan awooda aad PC ee, aad u dhaxeeya default iyo muuqaal HD dooran kartaa.
FlightGear kale oo uu leeyahay waxa ay network multiplayer u gaar ah, laakiin nasiib daro ma diyaaradaha dalwaddii firfircoon, iyo no taageero u shabakadaha Xildhibaan badan sida VATSIM ama IVAO.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.105